Imikhiqizo yentshebe: konke okudingayo ukuze unakekele izinwele zakho zobuso | Amadoda aSitayela
Imikhiqizo yentshebe iyisigaba sokugcina sezinwele zobuso. Ngaphambi kokuya kukhethwa kwesitayela esifaneleke kakhulu ekubunjweni kobuso nokunakekelwa.
Kepha ukuba owokugcina akusho ukuthi ababalulekile. Empeleni, ukunakekelwa kwezinwele ebusweni kubalulekile ukuthola inguqulo engcono kakhulu yentshebe yakho.
1 I-shampoo yentshebe
2 Isimo sentshebe
3 Amafutha esilevu
4 Intshebe yamafutha
5 Ikama lezintshebe
7 Isikele nentshebe
Njengezinwele, intshebe iqongelela ukungcola. Ngakho-ke, ukuyigcina isesimweni esihle, udinga ukuyigeza ngezikhathi ezithile. Amanzi afudumele angahle anele ukubuyisela izinwele esimweni sazo semvelo, ngenkathi amanye ama-shampoo ajwayelekile angasebenza, kepha hhayi ngempumelelo njengelilungiselelwe ngokukhethekile intshebe. Ngaphezu kwalokho, kubhekwa ukuthi bangaba neminye imiphumela emibi, njengokucasuka.
Cabanga ukufaka i- isilevu imoto enkambisweni yakho yenhlanzeko. Yisebenzise ngokulandela izinyathelo ezifanayo nalapho ugeza ikhanda lakho. Beka inani elincane ezandleni zakho bese ulihlikihla kahle ebusweni bonke bentshebe. Qinisekisa ukuthi nayo ingena esikhunjeni ngaphansi. Yishiye imizuzu embalwa bese ugeza ngamanzi amaningi.
Icala elifanayo njenge-shampoo. Uma kukhulunywa ngokulungisa intshebe yakho, kuwumqondo omuhle ukuthola isilondolozi sentshebe kuphela. Umsebenzi wawo ukushiya intshebe ngokubukeka okuhle (ukwanda kokukhanya kungenye yezinzuzo zako eziyinhloko) futhi isilungele isitayela esingadonsi. Ungayisebenzisa kanjani ngokulandelayo: qala usebenzise i-shampoo yentshebe. Ngemuva kokuhlanza, sekuyisikhathi se-conditioner. Faka isicelo, shiya imizuzu embalwa uphinde ugeze futhi.
Ungathenga i-shampoo ne-conditioner ngokwehlukana noma uye ku- 2-in-1 intshebe imoto futhi conditioner njengaleyo enikezwa ngumkhiqizo weBulldog.
Uma kukhulunywa ngemikhiqizo yesilevu, ingenye yezinto ezithandwa kakhulu. Faka isicelo uwoyela wentshebe kuzuzisa kokubili intshebe nesikhumba. Ngaphandle kokuvimbela izinwele ukuthi zome futhi ziqhekeke (isimo esenzeka ikakhulukazi ezintshebeni ezimpunga), kufaka phakathi uwoyela wesilevu esimisweni sakho senhlanzeko kuzosiza gcina isikhumba ngaphansi sinamanzi futhi uqede ukulunywa okucasulayo.
Ukuthambisa isikhumba kubaluleke kakhulu lapho ugqoke intshebe. Futhi ingabe lezo zinwele zobuso zivame ukulimaza umswakama ebusweni besikhumba, ezingazishiya zomile, ziqinile futhi, kwezinye izimo, zishwabana (njengendwangu ekhanda kodwa nasesilevini). Ngenhlanhla, uwoyela wentshebe usiza ukugcina konke lokho kuhlolwe. Yini enye, kufanele sengeze ukukhanya nephunga elihle elisinikezayo.
Lapho usebenzisa lo mkhiqizo, ungamane uwuthambise ngezintende nangezandla zakho noma usebenzise ikama lesilevu ukusabalalisa. Kunoma ikuphi, kuyadingeka ukuthi kuqinisekiswe ukuthi ingena kahle esikhunjeni ngaphansi kwentshebe, nokuthi ixhumana kahle nazo zonke izinwele, okuthile ikamu elingakusiza.
Ukuze uthole okuningi ngamafutha esilevu, cabanga ukuyisebenzisa ngokushesha ngemuva kokugeza. Isizathu ukuthi lokhu kugcina ingxenye yomswakama owengeziwe okhiqizwa ngamanzi.
Inhloso ye- intshebe umuthi icishe ifane naleyo kawoyela. Kusebenza ukugcina zombili izinwele zobuso nesikhumba ngaphansi kwesondlekile, kanye nokwengeza ukukhanya nephunga kwentshebe. Kodwa-ke, njengoba kusinda, usize ukwakha kangcono futhi ulungise intshebe.
Ngenxa yama-wax ayo nama-butters, lo mkhiqizo umqondo omuhle wokwakheka kwezintshebe eziphakathi nezide. Kodwa-ke, wonke amadoda anezintshebe ngokujwayelekile angazuza kulokho izimfanelo zokuthambisa nokubushelelezi izingidi ezingalawuleki kuzo zombili izintshebe namadevu.
Izinkomba zentshebe zisebenza kahle kakhulu uma kuziwa phatha intshebe ngokuthambekela kwamagagasi nokoma. Yize kungenasidingo sokuthi ube nentshebe enenkani ukusebenzisa leli thuluzi. Njengayo yonke eminye imikhiqizo, wonke amadoda anezintshebe ngokujwayelekile angazuza lukhulu ngokuxubha njalo.
El Ayikho imikhiqizo etholakele. ukhiye ekubumbeni izintshebe eziphakathi nezide kanye nokugunda izinwele futhi siza ukusabalalisa imikhiqizo enomsoco njengamafutha nama-balms.
Indima yangemva kwalokho vala ama-pores futhi uvikele ukubomvu nokutheleleka kulezo zindawo lapho i-razor noma i-trimmer trimmer ifake ingcindezi enkulu esikhunjeni.
Kungumqondo omuhle ukuba ne- udumo ngemuva emkhakheni wezenhlanzeko noma ngabe ugunde ngokuphelele noma unentshebe futhi kufanele uyigunde njalo. Lapho isetshenziswa ikhiqiza ukuzwa okuncane okuhlabayo. Uma ingasuki khona manjalo, kungadingeka ukuthi ushintshe i-aftershave yakho elandelayo.
Imikhiqizo eminingi yentshebe idinga ukuvuselelwa ngezikhathi ezithile, kanti eminye ingahlala impilo yonke. I- insimbi yensimbi engagqwali nezikele zamadevu zizokusiza ukudweba imigqa oyifunayo, ugcine ukulinganisa futhi unciphise lezo zinwele ezingalawuleki. Wasebenzise ngosizo lwekama lesilevu noma nini lapho ubona kunesidingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Imikhiqizo yentshebe
I-Presbyopia ne-hyperopia Ziyini futhi ziphathwa kanjani?